Nagarik Shukrabar - सेक्स संवाद :डगी स्टाइलमा सेक्स गर्दा मज्जा आउँछ
शनिबार, २६ फागुन २०७४, ०२ : २० | शुक्रवार
तपाईंंको नजरमा सेक्स के हो ?
अहिले त म यसलाई केटा र केटीले रमाइलो मान्ने माध्यम मात्रै ठान्छु ।
कुन नायिका तपार्इंंलाई एकदमै सेक्सी लाग्छ ?
जल शाह सेक्सी लाग्छ ।
आफूसँग सेक्स पावर कति छ भन्ने लाग्छ ?
बरु १ महिनामा एक पल्ट हुन्छ तर भएपछि दुई घण्टा भने जान्छ ।
सेक्ससम्बन्धी शिक्षा कहाँबाट लिनुहुन्छ ?
अफकोर्स ब्लू फिल्म । ब्लू फिल्म नै मेरो सेक्स गुरु हो ।
पहिलोपल्ट कुन उमेरमा सेक्स गर्नुभयो ?
१५ वर्षको उमेरमा हो, पहिलोपल्ट गरेको ।
सेक्स अफर कतिको आउँछ त ?
मलाई मात्रै होइन यस्तो अफर त सबै कलाकारलाई आउँछ भन्ने लाग्छ ।
कुन आसनमा सेक्स गर्न रमाइलो लाग्छ ?
मलाई त डगी स्टाइलमा सेक्स गर्दा मज्जा आउँछ ।
सेक्स गर्नुअघि सबैभन्दा सुरुमा पार्टनरको के हेर्नुहुन्छ ?
अनुहार नै हो । अनुहार राम्रो लागेन भने त सेक्स गर्न मनै लाग्दैन (हाँस्दै) ।